October 8, 2018 - TV Annapurna
रोयल्टी भुक्तानी गर्न विभागको पत्राचार
October 8, 2018 Annapurna TV
काठमाडौँ । विद्युत् विकास विभागले कानूनअनुसार रोयल्टी रकम नतिर्ने दुई जलविद्युत् आयोजनालाई सात दिनभित्र भुक्तानी गर्न पत्राचार गरेको छ । विद्युत् विकास विभागले शिवानी हाइड्रोपावर र युनिक हाइडेल प्रालिलाई नियमानुसार रोयल्टी रकम उपलब्ध गराउन अन्यथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट हुने भुक्तानी रकमसमेत नहुने जानकारी दिएको छ । विभागले यही असोज १८ गते ती दुई कम्पनीलाई पत्र लेख्दै तत्काल विद्युत् रोयल्टी रकम तिर्न भनेको हो । विभागका अनुसार विद्युत् उत्पादन शुरु भएदेखि हालसम्म ती जलविद्युत् आयोजनाले रोयल्टी रकम तिरेका छैनन् । विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ११ को उपदफा १ तथा रोयल्टी…
जङ्गलमा मानव कङ्काल फेला
बनेपा । काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा–९ लामा गाउँस्थित ठूलो गहिरो जङ्गलमा आज मानव कङ्काल फेला परेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका उपरीक्षक रविराज खड्काका अनुसार रुखमा नाइलनको डोरीमा हाडको सानो भाग अड्किएको र जमीनमा हाडको मात्रै थुप्रिएर रहेको अवस्थामा फेला परेको छ । प्रहरीले सो ठाउँबाट मानव कङ्काल, नीलो रङको ट्र्याकसुट, कालो रङको प्लाष्टिकको जुत्ता र खाली झोला फेला पारेको छ । प्रहरी उपरीक्षक खड्काले भने, “घटनास्थलको अवस्था हेर्दा पुरुषको जस्तो देखिन्छ, फेला पारिएका कङ्काल परीक्षणको लागि काठमाडौँस्थित फरेन्सिक मेडिसिन विभाग त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा पठाई थप अनुसन्धान गरिरहेका छौँ ।” File…
सीमा क्षेत्रको तस्करी नियन्त्रण गर्न सशस्त्र प्रहरीलाई निर्देशन
काठमाडौँ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सीमामा हुने तस्करी र अपराधका घटना नियन्त्रणका लागि सशस्त्र प्रहरी बललाई थप सक्रिय भएर लाग्न निर्देशन दिएका छन् । गृह मन्त्रालयमा सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक, अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक र सातै प्रदेशका बलका प्रमुख रहेका नायब महानिरीक्षकलाई निर्देशन दिँदै गृहमन्त्री थापाले सीमा तस्करी र अपराधका घटनाको नियन्त्रणमा तीन महीनाभित्र परिणाम देखिने गरी कार्य गर्न निर्देशन दिए । उनले चाडपर्व नजिकिएसँगै सीमाबाट हुने तस्करी बढ्न सक्ने भएकाले त्यसमा विशेष ध्यान दिनसमेत बलका अधिकारीहरुलाई सचेत गराए । उनले राज्यले बललाई सीमा, विपद् र शान्ति सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी दिएको…
बजार अनुगमनको नाममा ज्यादती गरेको भन्दै बजार बन्द
October 8, 2018 October 8, 2018 Annapurna TV
अभिमन्यु लामीछाने, उदयपुर । उदयपुरको प्रमुख ब्यापरिक केन्द्र मानिने कटारी बजारमा प्रशासनले गरेको अनुगमनमा ज्यादती गरेको भन्दै कटारी बजारका व्यापारीहरुले बजार बन्द गराएका छन् । आईतबारदेखि ईलाका प्रशासन कार्यालय कटारीका प्रमुख सुनिल पौडेलको नेतृत्वमा अनुगमन जारी रहेको थियो । सोमबार विहानै देखि फेरी अनुगमन सुरु भएपछि व्यापारीहरुले बजार बन्द गराएका हुन् । ईलाका प्रहरी कार्यालय कटारीका प्रमुख डिएसपी धु्रबकुमार श्रेष्ठ, शसस्त्र प्रहरी वेस क्याम्प लगायतका सरोकारवालाहरुले अनुगमन सुरु गरेका थिए । प्रशासनले गरेको बजार अनुगमनमा ज्यादती भएको भन्दै बजार बन्द गराएर आन्दोलनमा उत्रिएका उदयपुरको कटारीका व्यापारीहरुले भोलिदेखि थप कडा बन्द…
गुण्डा नाइके बस्नेतलाई थुनामुक्त गर्ने निवेदन खारेज
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गुण्डाका नाइके समीरमान बस्नेतलाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदन खारेज गरेको छ । न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरे र ईश्वर खतिवडाको संयुक्त इजलासले आज बस्नेतलाई थुनामुक्त गर्न दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदन खारेज गर्ने आदेश दिएको हो । यही असोज १७ गते न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले बस्नेतलाई सूचना पाएको तीन दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश जारी गरेको थियो । सोही आदेशानुसार सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएपछि बस्नेतको निवेदन खारेज गरेको हो । ललितपुरस्थित नख्खु कारागारमा रहेका बस्नेतलाई मुस्ताङ कारागार पठाइएको थियो…
सिके राउतविरुद्ध राज्य विरुद्धको मुद्धा, पक्राउ गर्दा किन हत्कडी लगाइएन ?
सोमबार अदालतको पेशी गरि फर्किने बेला पक्राउ परेका सिके राउत विरुद्ध राज्य विरुद्धको अपराधको मुद्धा चलाइएको छ । उनलाई ४ दिन म्याद थपेर प्रहरीले अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राखेको छ । जिल्ला अदालत गौरमा राज्य विरुद्धको अपराधकै मुद्दाको तारेख लिएर फर्किदै गर्दा प्रहरीले राउतलाई आइतबार साँझ पक्राउ गरेको हो ।पक्राउ पछि राउतका समर्थकहरु र गठबन्धनका जिल्ला अध्यक्ष अशोक सिंहको नेतृत्वमा प्रहरी कार्यालय अगाडि केही समय धर्नामा बसेका थिए । सादा पोशाकमा खटिएका प्रहरीले उनीहरु माथि निगरानी बढाएको थियो । राउतलाई हतकडी लगाइएको थिएन। प्रहरीको गाडीबाट बाहिर आउना साथ उनले सबैलाई नमस्कार गरेका…
बेपत्ता बालक अझै भेटिएनन्
चितवन । चितवनको नारायणी नदीमा पौडी खेल्न भन्दै घरबाट निस्किएका यहाँको एक बालक चार दिन देखि बेपत्ता भएका छन् । बेपत्ता हुनेमा भरतपुर महानगरपालिका २ क्षेत्रपुर बस्ने बर्ष १० को राजन भट्टराई रहेका छन् । भट्टराई भानु माविमा कक्षा ४ मा अध्ययनरत थिए । उनी शुक्रबारदेखि बेपत्ता भएको प्रहरीले बताएको छ । बालक हराएको थाहा भएपछि शुक्रबार पारिवारिक र जानसक्ने स्थानहरूमा सोधखोज गर्दा समेत फेला नपरेपछि परिवारले शनिवार मात्रै प्रहरीलाई खबर गरिएको थियो । खोजीमा जुटेका प्रहरीको टोलीले बालकको ब्याग र सर्ट नदी किनारमा फेला पारेको बताएको छ । बेपत्ता बालकको…
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको चितवनमा चरम दुरुपयोग
प्रनिश थापा/ चितवन । चितवनमा निजी अस्पतालमा स्वास्थ्य जाँचगरी सरकारी अस्पतालका डाक्टरहरुसँग धमाधम औषधि लेखाउने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबाट लाभान्वितहरुले निजी अस्पतालमा उपचार जाँच गरी भरतपुर अस्पतालबाट पुनः बिमाको टिकट लिई उक्त टिकटमा औषधि लेखिदिन डाक्टरलाई दबाब दिने गरेको भरतपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए । सामान्य समस्या भएर गएका बिरामीले पनि सिटी स्क्यान र एमआरआईसम्मको जाँचका लागि लेखिदिन डाक्टरलाई दबाब दिने गरेको मेसु पौडेलले बताए । ‘हाम्रै पैसा हो, हामीले बिमा गराएका छौँ, सबै जाँच गराउँछौँ भन्दै आउनेहरु धेरै छन्’, मेसु डा….
विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल जारी
विराटनगर । प्रदेश नं १ को प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ९३ (२) बमोजिम प्रदेशको खेलकूद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ माथि आज पनि छलफल भयो । छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य केदार कार्की, ओमप्रकाश सरावगी, एकराज कार्की, कुसुम श्रेष्ठ, कुलप्रसाद साम्बाङ र सूर्यमाराज राईले बोलेका थिए । उनीहरुले विधेयकलाई सङ्घले निर्माण गर्ने कानूनसँग बाझिने गरी बन्न नहुने भन्दै विधेयकमा संशोधन गर्नु आवश्यक छ भने । यसअघि शून्य समयमा उमिता विकले विगतका घटनामा बेपत्ता भएका नागरिकका बारे सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न प्रदेश सरकारसंग माग गरे । सदस्य लोकप्रसाद सङ्ग्रौलाले मुलुकमा बढ्दै गएको…
पाँच दिनभित्र उखु किसानलाई बक्यौता देऊ; सरकार
रमेश लम्साल, काठमाडौँ । उखु उत्पादक किसानले बक्यौताबापत पाउनुपर्ने रकम पाँच दिनभित्र भुक्तानी गर्न सरकारले आज सम्बन्धीत उद्योगीलाई निर्देशन दिएको छ । चाडबाड नजिकिँदासमेत चिनी मिलले भुक्तानी नदिएको गुनासो आएपछि सरकारले पाँच दिनभित्र चिनी मिललाई भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको हो । अर्थ, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, उद्योग तथा आपूर्ति, वन तथा वातावरण र सामान्य प्रशासनमन्त्री तथा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सो निर्देशन दिएको कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री चक्रपाणि खनालले जानकारी दिए । उक्त अवधि भुक्तानी नदिने उद्योगीलाई कारवाही गर्ने चेतावनीसमेत सरकारले दिएको छ । चिनी मिलले भुक्तानी नदिएपछि…